ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့အရေး ဦးစားပေး သတင်းများ (သြဂုတ် ၂၆ မှ ၂၈ အထိ)
မြန်မာ့အရေး ဦးစားပေး သတင်းများ (သြဂုတ် ၂၆ မှ ၂၈ အထိ)
- အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်သူများကို ဖမ်းဟု အာဆီယံအမတ်များ တိုက်တွန်း click
- ကင်တားနားရဲ့ ကားကို ရိုက်ပုတ်တာဟာ မဖြစ်သင့်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆို click
- ဘက်မလိုက်ကြောင်း လူ့အခွင့်အရေးသံတမန် ကင်တားနား ချေပ click
- အသင်းအဖွဲ့ ဥပဒေကြမ်းထဲက ပြစ်ဒဏ်အခန်းကို ပယ်ဖျက် click
- သတင်းမီဒီယာဥပဒေကြမ်း ဆွေးနွေးပွဲ (ရုပ်သံ) click
- ပေါင်းတည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲ (ရုပ်သံ) click
- ဆန္ဒပြခွင့် ဥပဒေကို ဆန္ဒပြကြ click
- ပုဒ်မ ၁၈ ကို မကျေနပ်လို့ ဆန္ဒပြသူတွေကို ပုဒ်မ ၁၈ နဲ့ တရားစွဲဆို click
- လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်နဲ့ စီတန်းလှည့်လည်မှု ပုဒ်မ ၁၈ (ရုပ်သံ) click
- စီတန်းလှည့်လည်မှုဆိုင်ရာ ပုဒ်မ (၁၈) ကို ဖျက်သိမ်းပေးဖို့ ရန်ကုန်မှာ ဆန္ဒပြ (ရုပ်သံ) click
- စီတန်းလှည့်လှည်မှု ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် စွဲချက်တင် (ရုပ်သံ) click
- ရှစ်လေးလုံးနှစ်ပတ်လည်နေ့ ဆန္ဒပြခေါင်ဆောင် ၁ ဦး တရားစွဲဆိုခံရ click
- ဒေါ်မြင့်မြင့်အေးနဲ့ ၂ ဦးကို နတ်တလင်းတရားရုံးမှာ ရုံးထုတ် (ရုပ်သံ) click
- ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းက အဓမ္မသိမ်းယူထားသော လယ်မြေများအတွက် လျော်ကြေးပေးဖို့ တောင်းဆို (ရုပ်သံ) click
- ကုလအကြံပေး မစ္စတာ Nambiar လိုင်ဇာ ရောက် click
- မစ္စတာ နမ်ဘီးယား ကေအိုင်အို ဌာနချုပ်ကို သွားရောက် click
- ကချင်နေရပ်ပြောင်းရွှေ့ဒုက္ခသည်များ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိစ္စ အကောင်အထည်မပေါ်သေး (ရုပ်သံ) click
- အစိုးရနှင့် UNFC နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမည် click
- သံတွဲမှာ လုံခြုံရေး တိုးချထား click
- ၂၀၁၁-၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ် လွှတ်တော်ရုံးစာရင်းတွင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်မညီသော အသုံးစရိတ်များ သုံးစွဲထား (ရုပ်သံ) click
- ၈၈ ခေါင်းဆောင်များ နော်ဝေရွေးကောက်ပွဲ သွားရောက် လေ့လာမည် click
- ချက်သမ္မတနိုင်ငံ မီဒီယာအတွေ့အကြုံ မြန်မာသတင်းသမားများကို ပြန်လည်ဝေမျှ (ရုပ်သံ) click
- မာတင်လူသာကင်းမိန့်ခွန်း နှစ် ၅၀ ပြည့်အခမ်းအနား ရန်ကုန်မှာ ကျင်းပ click
- မဲဆောက်မြို့က ဆန်လှူပွဲ (ရုပ်သံ) click
- ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ၀င်ထွက်ပေါက် ၄ ခုဖွင့် click
- ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် နိုင်ငံခြားသား ဝင်/ထွက်ပေါက် ၄ ခု ဖွင့်လှစ် click
- မလေးရှားမှာ တရားမ၀င် မြန်မာနိုင်ငံသား အများအပြား ဖမ်းဆီးခံရဖွယ်ရှိ click
- ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်၏ ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းကို ထုတ်ပြန်နိုင်မှု မရှိသေး (ရုပ်သံ) click
- ဂျပန်၏ အကြီးဆုံး လေကြောင်းလိုင်း ANA က Asia Wing လေကြောင်းမှ ရှယ်ယာဝယ်ယူရန် ရှိ (ရုပ်သံ) click
- ANA နှင့် Asian Wings ပူးပေါင်း၊ ၅ နှစ်အတွင်း Air Bus ၁ဝ စင်း ဝယ်ယူကာ တိုးချဲ့ပြေးဆွဲမည် (ရုပ်သံ) click
- မန္တလေးမြို့က အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေးပွဲတော် (ရုပ်သံ) click
- ပုဒ်မ (၁၈) ဖျက်သိမ်းရေးအတွက် အဖွဲ့ ၆ ဖွဲ့မှ ရန်ကုန်မြို့နယ် ၇ ခုတွင် လမ်းလျှောက် ဆန္ဒဖော်ထုတ် (ရုပ်သံ) click
- စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆိုင်ရာ ပုဒ်မ ၁၈ ကို ဖျက်သိမ်းပေးဖို့ လှုပ်ရှားတက်ကြွသူ ၂၀ ခန့် ဆန္ဒပြ (ရုပ်သံ) click
- ရန်ကုန်မြို့မှာ လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြသူတချို့ အဖမ်းခံရ click
- ၈ လေးလုံး ငွေရတု စီတန်းလှည့်လည်သူ ၂ ဦး စွဲချက်တင်ခံရ click
- ရှစ်လေးလုံးနေ့ မြို့ထဲကို လမ်းလျှောက်ပြီး ပန်းခွေချသူ ၂ ဦးကို ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် တရားစွဲပြန် (ရုပ်သံ) click
- ရန်ကုန်မှာလည်း လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ထား click
- လက်ပံတောင်း ဒေသခံတွေ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြ click
- ဖျာပုံမြို့နယ်အတွင်း လယ်သမား ၁၀ ဦး ဖမ်းဆီးခံရ click
- အလုပ်ရပ်စဲမှု နစ်နာကြေးအဖြစ် လုပ်ခလစာ၏ တနှစ်စာအထိ အများဆုံး ရရှိလာနိုင်မည် (ရုပ်သံ) click
- ထန်းကုန်းကျေးရွာ မီးရှို့မှု သံသယရှိသူများကို ဆက်လက် ဖမ်းဆီး click
- ကန့်ဘလူမြို့နယ်ဖြစ်စဉ်တွင် နောက်ကွယ်၌ လှုံ့ဆော်ဖန်တီးသူ ရှိ၊ မရှိ စတင်စစ်ဆေးနေ (ရုပ်သံ) click
- ပန်းတနော် တည်ငြိမ်ရေး ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ ထိန်းသိမ်းနိုင် click
- မစ္စတာ နမ်ဘီးယား ကချင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို သွားရောက်လေ့လာ click
- ဂျမိုင်ကောင်စခန်းမှာ ကချင်ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ ကုလအထူးအကြံပေး တွေ့ဆုံ click
- ဝေဖန်မှုများ ရှိခဲ့သည့် ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း ဥပဒေကြမ်းကို အမျိုးသားလွှတ်တော် အတည်ပြု (ရုပ်သံ) click
- ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြန်လည်သုံးသပ်မှု လျှို့ဝှက်ဆောင်ရွက်မည် click
- အခြေခံဥပဒေ ပြုပြင်ရေး လေ့လာချက် နှစ်မကုန်ခင် လွှတ်တော်ကို တင်ပြမည် click
- ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်နေစဉ် အစိုးရစစ်တပ်နှင့် TNLA စစ်ပွဲ ထပ်မံဖြစ်ပွား click
- KNLA ရဲ့ ၆ လပတ် အစည်းအဝေး click
- နယ်စပ်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူထားသော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအတွက် ကျပ် ၁၂၀ ဘီလျံ သုံးစွဲရန် ရှိ (ရုပ်သံ) click
- ဒေါက်တာကင်း နှစ် ၅၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် မြန်မာအမှတ်တရ click
- လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ ရုပ်ရှင်တွေကို လှည့်လည်ပြသ (ရုပ်သံ) click
- ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်၏ ပုံတူ ပန်းပုနှင့် ပန်းချီကို ရန်ကုန်တွင် ရေးဆွဲထုလုပ် (ရုပ်သံ) click
- စပါးခင်း ရေမြုပ်ပျက်စီးမှု အခြေအနေ (ရုပ်သံ) click
- ရွှေပြည်သာ ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေး (ရုပ်သံ) click
- ကမ္ဘာ့ဘဏ်က မြန်မာကို ဒေါ်လာ သန်း ၂၆၀ ကျော် ချေးမည် click
- ကမ္ဘာ့ဘဏ်က အတိုးမဲ့ ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၆၁.၅၀ သန်းကို ချေးမည် (ရုပ်သံ) click
- နိုင်ငံ ၇၉ ခုမှ မြန်မာပြည်ကို ငွေလွှဲနိုင်ရေး AGD ဘဏ် Money Gran နှင့် သဘောတူ (ရုပ်သံ) click
- ယခုလကုန်တွင် သီလ၀ါအထူးစီးပွားရေးဇုန် ပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ ပထမအဆင့် ပြီးစီးမည် (ရုပ်သံ) click
- ဂျပန် အေအန်အေ လေကြောင်းလိုင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ click
- ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေ အသစ်ရေးဆွဲနိုင်ဖို့ တိုင်းရင်းသားများ ကော်မတီ ဖွဲ့မည် click
- စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်နဲ့ စုဝေးခွင့်ကို ထိန်းချုပ်သော ပုဒ်မ ၁၈ အပြီးတိုင်ဖျက်ရေး တက်ကြွသူများ တောင်းဆို (ရုပ်သံ) click
- လယ်သမားအရေး ဆန္ဒပြသူ ပုဒ်မ ၁၈ နဲ့ ဒုတိယအကြိမ် တရားစွဲခံရ click
- သမ္မတအကြံပေးနှင့် တောင်သူများ၏ မြေယာပြဿနာ မနက်ဖြန် ကြားနာမည် click
- ၈ လေးလုံးငွေရတု တက်သည့် ဆရာမအား ထုတ်ပယ်သဖြင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ရှုတ်ချခံရ click
- အလယ်တန်းပြဆရာမ အလုပ်ထုတ်မှု တက္ကသိုလ်ဆရာ၊ ဆရာမများ ကန့်ကွက် click
- မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ပဋိပက္ခ အာဆီယံ သတိပေး click
- ကန့်ဘလူမြို့နယ် အခြေအနေ တည်ငြိမ်စပြု click
- ထန်းကုန်းအရေး ကိုင်တွယ်မှု အားနည်းခဲ့ click
- ကန့်ဘလူ ဆူပူမှုအတွက် လူ ၁၂ ယောက်ကို ဖမ်းဆီး click
- စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကန့်ဘလူမြို့နယ် ထန်းကုန်းကျေးရွာက အကြမ်းဖက်မှု (ရုပ်သံ) click
- ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ ထန်းကုန်းကျေးရွာတွင် ဒေသခံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြင့် လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်ထား (ရုပ်သံ) click
- ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်း ဥပဒေမူကြမ်း လွှတ်တော်နှစ်ရပ် အတည်ပြု click
- ပါတီများမှတ်ပုံတင် ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဆွေးနွေးဖို့ အမျိုးသားလွှတ်တော် လက်ခံ click
- ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဦးရွှေမန်း အကွဲအပြဲ ဘယ်ကို ဦးတည်မလဲ click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှေ့လမှာ ဥရောပသုံးနိုင်ငံ ခရီးထွက်မည် click
- အစိုးရလုပ်ရပ် ပြည်သူလိုအပ်ချက်နဲ့ ထပ်တူမရှိသဖြင့် ဆင်းရဲမှုတိုက်ဖျက်ရေး အံ့ချော်နေဟု ဦးစိုးသိန်း ဝန်ခံ (ရုပ်သံ) click
- လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ မှတ်ပုံတင်ရရှိရေး အခက်အခဲကို ၀န်ကြီးများ ဖြေရှင်းပေးမည်ဟုဆို (ရုပ်သံ) click
- တိုင်းရင်းသားဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျပ် ဘီလီယံ ၁၂၀ လျာထား click
- မိုးထိမိုးမိမှ ရွှေလုပ်ငန်းလုပ်သူများ ကုမ္ပဏီစည်းကမ်း ၁၂ ချက်ကြောင့် အခက်အခဲဖြစ်နေဟု ဆို (ရုပ်သံ) click
- မလေးရှားရောက် မြန်မာ ၄၅,ဝဝဝ UNHCR ကတ်ပြား ရရှိကြမည် click
- ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း လယ်မြေဧက ထောင်ချီ ရေမြုပ် click
- ပြည်တွင်းတွင် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းသစ် ၂ ခု ထပ်မံတည်ဆောက်ရန် စီစဉ်နေ (ရုပ်သံ) click
- နိုင်ငံခြားသားများ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ဂိတ်များမှ ဝင်ထွက်နိုင်တော့မည် click
အင်တာနက်လိုင်း ရေအောက်ကြိုးပြတ်တာမှဟုတ်ရဲ.လား ၊
ပြင်တာ ၁လ ကြာမယ်ဆိုပေမယ်. ၂လနားနီးနေပြီ။
... လွတ်လပ်စွာရေးသားပုံနှိပ် ထုတ်ဝေခွင်.
၁။ အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေ (မြောက်ကိုရီးယား)
၂။ ဒီမိုကရေစီမရတဲ. တစ်ပါတီနိုင်ငံတွေ(တရုတ်)
နိုင်ငံတွေ (ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဗီယက်နမ်)
တွေမှာ ခွင်.ပြုရိုးထုံးစံ မရှိတာတွေ.ရတယ် ။
မြန်မာလည်း ဒီပုတ်ထဲက ပဲ ပါဘဲ။